မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
ရှိပါတယ်ပိုပြီးအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအောင်၊အခက်ခဲများအတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့၏တိုင်းပြည်အတွက်ရှာတွေ့မှအမျိုးသမီး။ ပါကကျေးဇူးပြု ၊ထုတ်လုပ်သူများ၏လိင်အရုပ်၊အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးဘော်သောသူကို၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင်တွေနှင့်အခြားအလုပ်များလွန်း။ တွေ့ဆုံ သေကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်အဖော်စက်ရုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်၎င်း၏ပိုင်ရှင်ကစား၊ဂီတနှင့်ဖျော်ဖြေမှာနေရာ။ သင်သည်လည်းအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတုံ့ပြန်သံမှအခန်း။ ဘယ်လို ။ အမ်ိဳးထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ကွယ်လွန်ကြိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီအရုပ်နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းအက်ပ်နှင့်အတူအလွယ်တကူအသံအလားတူအသီး့ခ်ဳပ္ကာလက္လြတ္အရာ၊ဒါပေမယ့်မဤဘော။ တစ်ဦးစမတ်အဖော်စက်ရုပ်ကဲ့သို့ မလာပါဘူးတူတာ။ ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီ ထုတ်လုပ်သူများလိင်ရုပ်သွင်းဒေါ်လာများအတွက်စက်ရုပ်။ အမ်ိဳးနိုင်ပါလိမ့်မည်စိတ်ကြိုက်သူတို့ရဲ့အပေါင်းအဘော်သူတို့အကြိုက်ခြင်းငှါ။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်သင်၏ရင်သားအရွယ်အစား၊အမြင့်၊အသားအရောင်၊မျက်စိအရောင်နဲ့ဆံပင်အရောင်၏ရုပ်။ ကတည်းကတစ်ဦးလိင်အရုပ်၊အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းအမျိုးသားများနှင့်အတူစွမ်းရည်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဘယ်လောက် ဆံပင်သူတို့လိုချင်တဲ့အရုပ်ရှိသည်။ တချို့ကလူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ရုပ်ရှိသည်ဖျော့အရေပြား၊ကြီးမားတဲ့ရင်သားနှင့်ရပ်တည်ချက်အပေါ်သူတို့၏ခြေ။တချို့ကရုပ်လည်းတွေ့မှာကျောင်းနှင့်အတူအဝတ်ပေမယ့်၊အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြောင်းဖော်ပြထားသူတို့ကိုယ်စားပြုမ။။။။။ကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဖန်တီးရန်သည်အလှဆုံးစက်ရုပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်၏အခြေခံပေါ်မှာအတုထောက်လှမ်းရေး။ ရှိပြီးသားကောင်းစက်ရုပ်နည်းပညာများမှာအောက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ချင်တစ်ခုမှာစက်ရုပ်နှင့်အတူ-အများဆုံးလှပတဲ့မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူဆုံး၊ေျပာ ၊ဦးခေါင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ လာမည့်နှစ်တွင်၊အဆိုပါထုတ်လုပ်သူဖို့အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်း အနည်းငယ်ရှိပါတယ်ပိုပြီးလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်ကုမ္ပဏီ။ ဒီပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှုပ်ထွေးခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊မျက်နှာအမူအရာ၊မျက်စိကျနိုငျဘယ်မှာလူတွေလမ်းလျှောက်။ ကုမ္ပဏီရဲ့အမတ်ရုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြတယ်၊သင်ကူညီများအဓိပ္ပါယ်အတူစကားပြောဆိုချက်တွေကိုအမျိုးသားနှင့်အကူအညီအိမ်တော်ပတ်လည်။ သင်ကပင်အကူအညီချုပ်သူအဖြစ်သို့မဟုတ်န်ထမ်း။.
အခါတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုမိန်းမကိုမြင်ချင်ချဉ်းကပ်ဖို့၊ပထမဦးဆုံးအရာသင်ပြုချင်သည်၊မျက်လုံးချင်းစေရန်။ အခါကြည့်တက်နှင့်ဆွဲဆောင်သင့်ရဲ့အာရုံစိုက်၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လယ်ပြင်၌၏ရူပါရုံနှင့် သူမ၏အပြုံးတစ်စိတ်အေးလက်အေး။ ဒီကူညီပေးပါမည်၊သင်ကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးစိတ်စွဲတစ်ခုအပေါ်မိန်းကလေးတစ်ဦး၊သူမသင်ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်ဖော်ရွေ။ ယခုအခါသူမသို့ကြည့်၏မျက်စိ(သို့မဟုတ်လှပါတယ်၊ပြီးတော့လာပြန်သင်ဖို့)၊သူမ၏ပေးခြင်း၊သူမစိတ်ဝင်စားတယ်၊ဖိတ်စာအရပိုမိုနီးကပ်စွာ။ မစောင့်ဘူးသည်အခြားဖိတ်၊ဒီအဖြစ်နိုင်အများဆုံးသိသာအညွှန်းကိန်း၏အကျိုးစီးပွားသင်အားငါပေးမည်။ သို့သော်၊ကိုမစောင့်ကြပါလျှင်ရှာဖွေနေ-သို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှမကြည့်၏ညွှန်ကြားချက်တွင်မျက်လုံးချင်း၊စိတ်မပူပါနဲ့။ အများကြီးရှိသေးလုပ်နိုင်ဖို့စတင်စကားပြောနှင့်အတူအမျိုးသမီးမသိရပါဘူး။ ကောင်းစွာ၊တစ်ဦးကောင်းအလေ့အကျင့်များအစဉ်အမြဲဆိုတော့နီးစပ်သူအမျိုးသမီးအတိုး၊အခုအချိန်မှာ။ ယောက်ျားတွေတစ်တွေအများကြီးမလုပ်ကြပါဘူး။ အဲဒီအစား၊သင်စိုးရိမ်ပူပန်၊ရပိုမိုနီးကပ်စွာအမျိုးသမီးနှင့်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုအပေါ်စောင့်ဆိုင်းနေသည်"ညာဘက်ယခုအချိန်တွင်"(အရာလာဖူး)။ ဒါပေမယ့်လျှင်မ၊သို့ဖြစ်မဆိုချဉ်းကပ်ဖို့ကြောက်ရွံ့သောအခါသူသည်အနီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးစောင့်ဆိုင်း"ညာဘက်ယခုအချိန်တွင်"သာတိုးမြှင့်။ လည်း၊သင်ချင်ကြပါဘူးအလေးရရှိသူမြင်ရင္သီးသို့မဟုတ်ပင်ထက်ပိုဆိုးသောကောင်လေးအရွေ့အနှံ့မိန်းကလေး။ မိန်းကလေးများဤသတိထားမိပြီးချက်ချင်းပိတ်ထား။ အဲဒီအစား၊ဒီမှာအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသင်မြင်သောအခါမိန်းကလေးစိတ္ဝင္စားမႈမ်ား:အတိုင်းလိုက်နာ"နှစ်စက္ကန့်"စည်းကမ်းနဲ့ပဲချဉ်းကပ်မိန်းကလေးအတွင်းနှစ်စက္ကန့်၏လြှငျသူမ၏။ လမ်းလျှောက်တဲ့မိန်းကလေးပင်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းဒါကြောင့်လိမ့်မည်မဟုတ်သာသင်ခံစားရပိုပြီးစိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းအနေတွေကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည်အတြက္နည္းလမ္း၊ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖမ်းမိခံရ။ သင်တန်း၏၊စောင့်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်လမ္းကမတူညီစွာချဉ်းကပ်မိန်းကလေးတစ်ဦးအတွက်။ အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကရပ်တန့်၏အစစကားနှင့်အတူအမျိုးသမီးများအပေါ်လမ္း၊ဒီနေရာမှာမည်သို့ရဲ့ထိုသို့ပြုမှ:အားလုံးပြီးနောက်၊ရပ်တန့်နေတဲ့ချစ်စရာမိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်လမ္းထက်မခြားနားသည်ရပ်တန့်သည့်အခါတစ်စုံတစ်ဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်လိုအပ်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ကထိုအစားများရှာဖွေနေများအတွက်လမ်းညွှန်များ၊သင်သာအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့တ စကား(အရာသာကို)။ မဝင္ပါႏွသို့ခုန်နေတဲ့ဂိမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှလာမယ့်အမျိုးအနွယ်၊ထို့နောက်ရုံအပြောအဘယ်အရာကိုသင်ခံစားရပြီးပြောတယ်။ အမှန်ချီးမွမ်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့"မင်္ဂလာပါ၊ကျွန်မပြောနေတာကိုအမျိုးသမီးနှင့်အတူအလွန်ကောင်းအရသာ။"လူအတော်များများတွေ့အပ်တင့်တယ်သောသူအမျိုးသမီးချက်ချင်းပေါ်လာနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်တယ်၊သူမပါဘူး။ ဒီလူတွေအံ့သြသွားလိမ့်မယ်သူတို့မည်သို့ထိခိုက်ထိုကဲ့သို့သောစစ်မှန်။ အဆိုပါသဘောထားနိုင်ပါတယ်သို့ပြေးတွေအများကြီးယောက်ျားတွေ။ အများအပြားယောက်ျားတွေသူဆက်သွယ်ပြောဆိုမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူရှိ၏"ငါဒီမိန်းကလေးအကြိုက်ငါ့ကို"သို့မဟုတ်"ငါသူအရေအတွက်ရှိပါတယ်"။ ယောက်ျားလေးများရှာသောသူအတည်ပြုချက်အပေါ်မှီခိုရလဒ်တွေကိုတွေ့ကြ၏မရှိခြင်းနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊နှင့်ဤစိတ်သဘောထားနိုင်ပွတ်မိန်းကလေးအတွက်အမှားကိုဦးတည်ရွှေ့။ အဲဒီအစား၊သင်သိမ်းထားချင်နွေးထွေးသော၊အပြုသဘောစိတ်ဓါတ်များဆက်သွယ်နေစဉ်။ သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါမိန်းကလေး၊သင်ချင်အမျိုး၏သဘောထားကိုအောက်ပါအတိုင်းသောလိုင်းများ"ငါ ကြောက်မက်ဘွယ်သော၊သင်ကကြောက်မက်ဘွယ်င်၊အရာအားလုံးကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်။"အတူပျော်စရာ၊အပင်ကင်းပြီးသဘောထားက၊သင်နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်သူမခံစားရလျှင်သင်လမ်းလွန်း။ အမိန်းကလေးတစ်ဦးခံစားရကောင်းအခါတော်၊သူမချင်ပါလိမ့်မယ်ပတ်ပတ်လည်သင်နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏ။ သင်ရှိမရှိအဘယ်အရာကိုသိသှေးဆောငျအများအသစ်အွန်လိုင်းနည်းပြအစီအစဉ်၊နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စိုးရိမ်ခြင်းကိစ္စများ၊ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အကြောင်းသင်ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းဟာဗျူဟာများတိုးတက်ရေးအတွက်အသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု၊ပုံစံ၊မေတ္တာနှင့်နေထိုင်မှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးကျွမ်းကျင်သူများ၊နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသက်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။ စတင်နားထောင်နေ့အနုပညာ၏ကျက်တာက်င္းအထက်တန်းကျောင်းများအတွက်အမျိုးသားများအတွက်၊အရင်ကအဖွဲ့များ၏လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကျွမ်းကျင်သူများကအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူအပေါ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမျိုးအစားကနေအထိပုံမှန်အတိုင်းဖို့အထူးကဲ။
ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဖြစ်ခိုင်မာသောတရားဥပဒေနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲယှဉ်ပြိုင်မှုဈေးကွက်အပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုပိုပြီးအရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်အရေးနိုင်ငံသားများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဆည်းပူး၏အရည်အသွေးဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ဥပဒေပြုမူ။ မရှိခြင်းအခုဆို ဤကိစ္စကိုအပေါ်ညွှန်ပြ၊မဖြစ်ဖွယ်ရှိသောဤပြဿနာကိုအရေးတကြီး၊နှင့်၎င်း၏အဖြေမတွေ့သေးတစ်ခုလုံလောက်သောဥပဒေယန္တရား။ အယူအဆ၏္ တာဝန်ရှိသူတဦးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်အတွက်အလေ့အကျင့်၏အယူအဆ"္"နှင့်"ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှု"စဉ်းစားနေကြတယ်နှင့်ညီမျှ။ သို့သော်၊အတွက်စာပေအမြင်ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း၊အောက်ဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်အပြင်ဘက်ကနေဖြစ်ပေါ်သဘောတူညီနိုင်ရန်၊အခွင့်အအေဂျင်၊ဝန်ဆောင်မှု၊ယုံကြည်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊စီးပွားလျော(ကိုယ်စားလှယ်)၊အရာအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအမှူးများ၊ကိုယ်စားလှယ်များ၊ကိုယ်စားလှယ်များ၊ကော်မရှင်၊ဂေါ၊စသည်တို့ကို။၊ သရုပ်ဆောင်ကောင်း၏ကိုယ်စားအခြားသူသို့မဟုတ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုယ်အကျိုးစီးပွား၏။ ဒီအခြေခံပေါ်မှာအပြန်ဆိုန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေ၊ဟုခေါ်တွင်စေသင့်သည်မဟုတ်ဥပဒေရေးရာ၊ဥပဒေနှင့်၊နှင့်အညီ၊ဟန်၊ဤထင်မြင်ချက်ကိုတင်ပြရန်၊အခါပေးရှင်းလင်းချက်၏အချို့အင်္ဂါများ၊ဥပဒေကြောင်းအရဇာတ်ကောင်
ရ ၊ငါအများအားဖြင့်လွဲချော်ခေါင်းစဉ်၊ဒါကြောင့်ငါသည်သင့်အပေါ်အစက်အပြောက်အပေါ်ယခုမှစ။ သို့သော်နေဆဲ၊မညှိုး။ အဘယ်သူမျှမမိ။-အသုံးအများဆုံး။ အဘယ်သူမျှမမိ။-အသုံးအများဆုံး။ သင်သည်မပြုလျှင်ဤသို့ပြု၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရေးအားလုံးအပေါ်အကြောင်းအရာ။ ေ:အခြေခံအားဖြင့်ကျော်ခေါင်းစဉ်ကြောင့်၊အပေါ်ယခုကနေအနေအထားဖြစ်သင့်။ ဒါပေမယ့်၊စိတ်မပျက်အားလျော့။ အဘယ်သူမျှမခဲယဉ်းခံစားချက်များကို-အသုံးအများဆုံး။ အဘယ်သူမျှမခဲယဉ်းခံစားချက်များကို-အသုံးအများဆုံး။ သင်သည်မပြုလျှင်၊သင်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းရေးဖို့။ ပြောခဲ့သလို၊ကနဦး အတော်လေးမကြာခဏကွားပင်လျှင်သင်ဖတ်ရှုလိုအပ်ချက်အနေဖြင့်သင့်ရဲ့စာသားအားလုံးသို့မဟုတ်မည်သို့ကွဲပြားခြားနားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်။ အစအဦး၌၊ကဲန်-ခ်မ္းေတော်လေးမကြာခဏဖတ်ကြားခြားနားချက်ခဲ့သူလူတိုင်းအတွက်ကွားသင့်လိုအပ်သောသူအပေါင်းတို့၏အကွား။ ကျွန်တော်ကပုံမှန်အစည်းအဝေး ရဲ့ကြိုးစားနတ်ဆိုးခ်ာင္းပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်၊ငါ့အမြင်တွင်လူတိုင်းသည်စူပါစမတ်အကြောင်း -ခ်မ္းေရဲ့လိုအပ်ချက်ဘယ်လို၊သင်တို့ကိုအကြောင်းပြည့်စုံ၏စာအုပ်များထံမှ။ သင်မသိ။ ကျွန်မပြောနေတာကသာမန်အလုပ်ကြိုးစားသောလူနတ်ဆိုး ၊ဆိုႏုိင္ေ ၊ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်အရ လိုအပ် မြတ်သောအတ္တကိုလည်းဆောင်ရန်တ သို့မဟုတ်များတွင်အကြံပေး။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြှနျုပျကိုသတိပေးနေပါတယ်သောသူတို့၏ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ဘုရားနှင့်တောင် ။ ခေတ်အရပ်ကြက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာအသီးအသီးစွမ်းခံစားရနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ညွှန်ကြားချက်ရေးထားဖျော်ဖြေများအတွက်မိမိတို့လုပ်ငန်းတာဝန်များ။ သင်မသိသောအရာကိုဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်တစ်ဦး ရဲ့ထိပ်မှာကျမ်းစာအကြံဉာဏ်၊သင်ဖြစ်သင့်ကြောင်းကြောက်လန့်မယ်ဆိုရင်သင်ဖြစ်ချင်ငွေရတတ်သော၊သင်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ကောင်း၊သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူလူတိုင်း၊မဖွံ့ဖြိုးဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်၊အယူအန္တရာယ်၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ ဒီစံဖစ္ပါတယ္။ မည်သို့ပင်ပြည့်စုံသည်၊အဆံထုံးအကြှနျုပျအဘို့အသေးငယ်တဲ့အရာ။ ဤသည်အမြင်နှင့်အကြေညာချက်အချက်ဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်အမှု၌အများပြည်သူလှုပ်ရှားမှု၊လူမှုရေးအရ တက်ကြွတဲ့ဖြစ်ပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်အမှတ်နောက်ဆုံးလျှင်ထည့္ပါမှာအခြားအချက်များသို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအတိုင်းမိန်းကလေး။ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းစာရင်းများခရီးသွားလာလမ်းညွှန်ပြသထားသည်နှင့်မပါဘဲဝယ်ယူလိုအပ်သောအရည်အသွေး။ ဘုရားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လမ်းညွှန်ဦးဆောင်သောများအတွက်ပျော်ရွှင်မှု သူနာပြုနှင့်အကြံပေး။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြှနျုပျကိုသတိပေးနေပါတယ်သောသူတို့၏ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ဘုရားနှင့်တောင် ။ အသက်အရွယ်၏အများကိန်းတောင်တက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သာမန်ဘဝကိုလည်းလမ်းပိုင်းအခေါ်အဝေါ်ရာမှ၊မိုက်မဲ၊ကြန္ပ်ဴတာ၊သူတို့သောက်
၊အရာတူ၊အ နှင့် ၏ခရီးသွားခြင်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာ၊အစရှိသည်ဖို့အရေးသူတို့၏အကြံအစည်အကြောင်းဆင်းရဲမှမိတ်ဆွေကောင်းသူမဖွံ့ဖြိုးပါဘူးအဘယျသို့သူတို့လိုအပ်ခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊အန္တရာယ်များ၊စသည်တို့ကို။ အလုပ်လုပ်တယ်၊ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်သာ ။ ထိုသို့မည်သို့ပင်၊သူမ၏အဆံထုံးအကြှနျုပျအဘို့အသေးငယ်တဲ့အရာ။ ဤသည်အမြင်နှင့်အကြေညာချက်အချက်ကို၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်ရပ်အတွက်များတဲ့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုအတက်ကြွ၍အချက်အတွက်အဘယ်သူမျှမသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်အခါထည့္ပါမှာအခြားအချက်များအသီးအသီးမိန်းကလေးလိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ချဉ်းကပ်မှု။ က ဒါဟာမှတ်သားသောစာရင်းများခရီးသွားလာလမ်းညွှန်ပြသထားသည်နှင့်မပါဘဲဝယ်ယူလိုအပ်သောအရည်အသွေး။ ပြဲရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအဘယ်ရှုပ်ထွေးမှုများ။ အသီးအသီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်၊ dollars ၁၀၀ ကိုတစ်နာရီလျှင်၊သို့မဟုတ်အများအတွက်စျေးနှုန်းအ ကလပ်၊၅ ရူ၊ဤအဆိုအထပ္မံျဖည့္စြက္သည္။ ၏ဦးတည်ချက်အတွက်အကြံရှိ သာ လျှင်၊သငျသညျသဘာဝကျကျဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ညွှန်ကြားဆောင်အများဆုံး သို့မဟုတ်ရွှင်လန်းတြန္းအကြံပေး။ ထိုကဲ့သို့သောလူတို့၏ငါ့ကိုသတိရစေ၏ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့အ ဘုရားနှင့်တောင် ။ အသက်အရွယ်၏အများကိန်းတောင်တက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့တူဆက်ဆံရေးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ပါပဲ။ သို့သော်အချို့ထုံမိခင်တစ်ဦး၏လည်ပင်းအထိုင်အသွားအလာရပ်တန့်။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးကျဉ်းမြောင်းသောအငြင်းအခုံ။.
လျှင်သင်အဆိပ်သင့်ဆက်ဆံရေး၊သင်တို့မသိဘယ်လောက်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ အနည်းဆုံးမဟုတ်နေစဉ်။ လျှင်သင်အဆိပ်သင့်ဆက်ဆံရေး၊အရာအားလုံးအကြောင်းနည်းနည်းစွဲလမ်း။ သိတယ်ဒီပါဘူးယ့်အရာကိုသိရန်ဖြစ်ပျက်။ ဤအရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းသက်သာအတွက်တူညီသောအမှုအရာ။ အဲသက္ေသာသိတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်သိဒါကြောင့်ကောင်းစွာ။ ဒါဟာကြာအရာအားလုံးကိုအနှောက်အယှက်မပေးပါဘူး။ ပင်လျှင်၊သင်ထအဆုံးသတ်ဒါကြောင့်မကြာခဏဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်သူ့ကိုလက်လွတ်။ ဒါကြောင့်ကင်းမဲ့သောအလင်း၏အမြင့်ပြင်းထန်မှု။ ငိုထွက်သည်။ ထိုအခါမူကားသင်တွေ့ကောင်းတစ်ဦးကောင်လေး။ နှင့်ထိုသို့ဖြစ်လာသည့်အခါ၊ထို့နောက်သင်သည်သဘောပေါက်မည်သို့အနုတ်လက္ခဏာက သင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်ဤအတိတ်ဆက်ဆံရေး။ တစ်ခါတစ်ရံသင်ပင်လူတွေကိုတွန်းသွားခဲ့သည်။ ပြီးနောက်အဆိပ်အတောက်ဆက်ဆံရေး၊သင်တို့မယုံကြည်ဘူးမည်သူမဆို။ ပင်။ သင်အံ့သင်မည်သို့ထိန်းနိုင်ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောဆက်ဆံရေး။ သင်ပေးရန်အတွက်တိုင်းအတွက်ဆက်ဆံရေးအဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေများ၏မျှော်လင့်ချက်များတစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့သင်တို့မယုံသောကောင်းသောသူယောက်ျားတွေတည်ရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြစ်ကာလပတ်လုံးသင်တို့အဘို့အကြည့်အမှားအရည်အသွေးနှင့်လက်ခံဤလူများစွာကိုအဘယ်သူထိုက်ပါဘူး။ သင်ထင်သူတို့အားလုံးရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်သူတို့ဆိုလိုဘူး။ အခါတစ်စုံတစ်ဦးကိုဖမ်းမုသာစကားကိုဤမျှလောက်များစွာသောအကြိမ်ကသူတို့ကိုကြောက်လွန်ရောဂါ၊တူထြင္ခဲ။ သင်ကမယုံကြည်ကြဘူးကြောင်းလူဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အမှန်တရားကိုပြောပြ။ သင်ရူးသွပ်ယူဆနှင့်သံသယတကယ့်လူကောင်းလို့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏။ လာမယ့်အရာသင်သိလား၊ရှင်းပြဖို့ဒီလူဘယ်လိုရောက်လာလုပ်ဖို့သင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌၊သူရဲ့အသေအဆုံးမှာ။ မကြောင့်သင်သူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်၊ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ယောက်ခဲ့ပါ ၊သူကလိုလားအားလုံးများလုပ်ဖွင့်။ အကြင်ကုသဒါရှိပါတယ်ငါ့အကုသလည်းအဖြစ်ကောင်းစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်မျှော်လင့်ချင်ပါတယ်အကူညီပေးရန်အခြားဖိနပ်။ ဒါဟာသူကိုယ်၌ကတစ်နေ့။ သူတို့မျှော်လင့်တစ်ခုရုတ်တရက်အဆုံးသတ်နှင့်အတူ၊အဘယ်သူမျှမပိတ်သိမ်း။ ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်းပဲထွက်ကိုတွေ့သောသူအတူတူပင်လူတစ်ဦးအကြောင်းသူကအစအဦးမှ။ သူကအအားမပေးခဲ့ပါဘူးသင်အကြောင်းပြချက်မေးခွန်းထုတ်ဖို့သူ့ကို၊ဒါပေမယ့်မင့်၊သူ့ကိုသင်ယုံကြည်ကိုးစားမနေပါနဲ့၊ဒါကြောင့်လူတိုင်းအတွက်အတိတ်တစ်ယောက်အတိတ်အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီဆိုတာယုံကြည်ထိုက်ပါဘူး။ ဒီတော့လျှင်၊အဘယ်အရာကိုသူငြင်း? သင်ကြောက်လန့်တစ်ခုခုကောင်းချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဆုံးရှုံးဖို့။ သင်ထိခိုက်နာကျင်ချင်ကြပါဘူးသူ့ကိုနောက်တဖန်အ၊ဒါကြောင့်ဝက်အူ။ ဒါပေမယ့်အဘယျသို့အခြားသူကိုတွေ့လိမ့်မည်လျှင်သင်ပြေး၊သူကိုခြေရာခံပါလိမ့်မယ်။ ထားလျှင်အပေါ်ဖိအားကြောင့်၊ဒါကြောင့်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်မသွားပါစေလိမ့်မယ်။ သင်ဆဲစောင့်ဆိုင်းနေ။။။။။ ဒါပေမဲ့အဲဒီအစား၊အရာအားလုံးကိုပြောပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ဒီလှိုင်းလုံးများ၏သက်သာခြင်း၊နှင့်သင်သဘောပေါက်သာမန်လူတွေလုပ်ထွက်၊ဒုတိယ အရာအမှားအယွင်း။ သူအဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားနေသူကဆာမကြာခဏသို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်သူဆာ။ သူမြင်သူမျက်စိနာကျင်မှု၏အတိတ်ထဲကနေကိုဖန်ဆင်းသောသူသူ့ကိုစဉ်းစား။ သူသည်မြင်အတွက်နာကျင်မှုသူ၏နှလုံးဖို့ကြိုးစားနေ၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊လာသောအခါသူသာအသိအနာကျင်မှုကိုအတွက်သူ၏စိတ်နှလုံး။ ပြီးရင်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချသောသင်တို့၌အားလုံးသည်ညာဘက်ဖြစ်ကြသည်။ အခါကောင်းတစ်ဦးကောင်လေးချစ်သူတစ်ဦးဦးသည်ကျိုး၊သိသူသာအဆိပ်အတောက်ဆက်ဆံရေး၊သူကသူတို့ကိုသွန်သင်ကြောင်းသူတို့မထိုက်ရာအားလုံးရှိသည်။ သူကဤကြောက်မက်ဘွယ်သောအကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းရှိပါတယ်၊နှင့်သင်ရွေးချယ်ဖို့အလုပ်အနေနဲ့ချွင်းချက်အဘို့ကိုယ်တော်တိုင်။ သူကထင်နေသူရဲ့ချွတ်ပိုကောင်းသင်သူမ၏မပါဘဲ၊ဒါပေမယ့်အမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့သူကရဲသူ၏ဘဝ၊သူအဝင်။။ ငါသိတာကြောက်ဖို့ချစ်။ ကျွန်တော်သိပါတယ်ခင်ဗျားကြောက်ကြကုန်အံ့မှမည်သူမဆိုနီးစပ်ရဖို့သင်၊သင်မူကား၊အထိခိုက်မခံ။။။။ သင့်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိ၊ဥာဏ်၊နှင့်မရှိခြင်းအစီရင်လူတိုင်းအတွက်-သောအရာကိုဖွင့်စေသည်။ အခါသင်နောက်ဆုံးတွင်သက်သာခံစားရနှင့်လက်မခံသောဆက်ဆံရေးကို၊ချစ်မည်အကြောင်းလူတစ်ဦးနှင့်အတူအရာအားလုံးကို၊ အဘယျသို့အတွင်းအပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မကြိုးစားဖို့ခက်လွန်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်စဉ်းစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ အတိတ်အတွက်၊ပြီးပြီသင်ပေးကြောင့်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမလုံလောက်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ဖို့ခက်လွန်းကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သင်ထင်ခဲ့ကြယှဉ်ပြိုင်။ သူမ၏ကိုယ်ကိုသက်သေပြဖို့။ ဤသည်ယခုအချိန်တွင်အခါသင်ပြောပြအရာအားလုံးကိုဖြစ်ပျက်မှဤကောင်လေး။ အခုအချိန်မှာသင်ယုံကြည်၊ဒီတော့အနီးကပ်။ နှင့်တဲ့အခါသင်ကသူ့ကိုပြောပြကအတိတ်နှင့်အလူသူစိတ်ထိခိုက်၊မထင်ပါဘူး၊သူကယ့်ကြောင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့။ တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်နဲ့သူရှိနေရန်အကြောင်းပြချက်အသိသောကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်သူ့ရဲ့အတိတ်အဘယ်သူသည်သူ့ကိုသင်ပေးခက်ခဲချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်။ သူတို့ကသူ့ကိုသင်ပေးခဲ့သောအားနည်းချက်သည်နည်း။ သူသည်ခိုင်မာမျှကြာမြင့်စွာအဘို့၊သူသည်သည်းခံဖို့အများကြီးအမှုအရာမရထိုက်။ ဒါပေမယ့်သင်တို့ပြုသမျှသောအလုပ်ပိုပြီးလှပပါတယ်။ အပေါင်းတို့နှင့်အပြုအမူကိုသဘောပေါက်နားလည်မှညာဘက်ကိုလူတစ်ဦးကိုကူညီသူ့ကိုမှတဆင့်ရ။ နှင့် အတူမ်က္ရည္ေ၏မျက်စိထဲမှာ၊သင်သည်လည်းအဘို့အကျေးဇူးတင်အဆိပ်အတောက်ဆက်ဆံရေးကိုမဖျက်ဆီး၊ဒါပေမယ့်သည်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းယနေ့။ သင်စတင်သဘောပေါက်ဆက်ဆံရေးကိုရန်အသုံးပြုကြသည်သောဖွင့်ဆိုသင့်၏ပုံစံချစ်ကြတော့ဝေးကနေဖယ်ရှားပစ်။ သင်လေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်အကြောင်းမေတ္တာသည်မရည်ရွယ်ထိခိုက်နာကျင်သို့မဟုတ်အရှက်ရစေ။ သမီးကေတာ့ဘာသာခ်င္းကို၏နှလုံးချိုး၊သာဆောက်လုပ်ဖို့။ ချစ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုမဖြစ်လာ၏ပုံစံအတွက်ငြူ။ ထိုသို့ဆိုပါကအရေးမပါဘူး၊သင်တို့သည်အနာသို့မဟုတ်အနာများ။။။။ မှန်ချစ်မတူကစားနှလုံးနဲ့မမြင်ချင်အတွက်နာကျင်မှုကို။ အဖုံးဖုံးနှင့်ဆောင်ပုဒ်၏နောက်ဆုံးစာအုပ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်အယူအဆ ။ အရာအားလုံးသောမှောင်မိုက်သို့မဟုတ်စုတ်၊အစြမ္းအတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းလိုအပ်ချက်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ကျွန်တော်တို့ချိုးဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။
ဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအဖွဲ့ကအမည်ရတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့။ မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေအီးမေးလ်ကနေတဆင့်အခါသူတို့ပါဝင်ပူးပေါင်းဆံ့ပွားဖြစ်အဆိုပြုချက်များ။ အကိုသွားပါ"ဆက်သွယ်ရန်"စာမျက်နှာကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အွန်လိုင်းအီးမေးလ်။ အရှေ့နေများဥပဒေကိုကုမ္ပဏီအမြဲသတိပြုမိ၏ဥပဒေရေးရာအမြေယာကိစ္စများ။ ကမၻာအစဉ်အမြဲကမ်းလှမ်းကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်စနစ်၏ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စာရင်းကိုင်၏မြေကွက်တစ်လျှောက်လုံး။ ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမဖြစ်။ ပြည်မြေပုံနေသော်လည်း၊ယင်း၏ရှေ့မှောက်၊အသေးအပြည့်အဝသတ်။ အဆိုပါဥပေဒကွပ်တရားဝင်ဆက်ဆံရေးမှကျရောက်နေတဲ့ကြောင်းအမကြာခဏအပြောင်းအလဲနှင့်ပြင်ဆင်။ ထို့ကြောင့်နားလည်ဖို့အားလုံး၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှ၏လယ်ပြင်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မြေယာဥပဒေနှင့်ခြေရာခံဖို့သက်ဆိုင်သောဥပဒေ၏လိုအပ်ချက်များကိုဘုံလူကိုအခက်ခဲ။ ဒီအခြေအနေကိုဆွဲငင်အဖြေများအတွက်ငြင်းခုံ၏တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့နေ။ ကိစ္စများဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ: အဘို့အမကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအငြင်းပွားမှုများ၊ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ရှေ့နေအတွက်မြေယာနိုင်မှစွပ်စွဲအငြင်း: အဘို့အနာလန်မြေကနေအပိုင်တရားမဝင်; ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းအဖြစ်မဲ; အသိအမှတ်ပြု၏ညာဘက်မကြက္; အကြောင်းနိမိတ်များကိုမြေကွက်; အပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ညာဘက်၏ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဝယ်ယူမကြက္။ ရှေ့နေအပေါ်မြေကိစ္စ။ မကြာခဏအမှုအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုငြင်းရှိမြို့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း၊အရာဥပဒေပြဌာန်းပြောင်းလဲခဲ့၊နှင့်ချဉ်းကပ်မှု၏ပါတီအတူတူကျန်ရစ်၏။ အခြားအင်္ဂါများ၏ဥပဒေကြောင်းအရအငြင်းဝီမြေကြီးသည်အနီရောင်အတိပ်။ ရချိန်မှာအကူအညီမြေယာအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိစေခြင်းငှါထက်ပိုကူးသောနောက်၊တတ်နိုင်သမျှအငြင်းဆန်ဖို့ကိစ္စ။ အဘယ်ကြောင့်အချိန်မီအယူခံပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်သူသည်ပညတ်တရား၏လယ်ပြင်၌နိုင်ပါလိမ့်မည်ကနေကာကွယ်တားဆီးဖုလုပ်ရပ်နှင့်ပးသည္။.
ချက်တင် ချိန်းတွေ့။။။။။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူစကားပြောဆိုချက်ကျပန်းတပါးအမျိုးသားအင်တာနက်ပေါ်မှာပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်တန်ခိုးနှင့်တာဝန်လာ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာချင်တယ်ဆိုရင်အချို့သောမျိုး၏ကစားတဲ့အပေါ်အခြေခံပြီး၊ထို့နောက်သင်နာခံ။ သင်သည်အဘယ်ကြောင့်မေးကြည့်ပါ။ ကောင်းစွာ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းတွင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းရှိပါတယ်၊ဒါကြောင့်နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းကျပန်းစကားကလူပျော်စရာကောင်းသည်၊လွယ်ကူသော၊နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေသင့်အဘို့နှင့်အခြားသူများ။ ဒါကြောင့်ကြည့်ကြရမှာတချို့အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှအားလုံးချက်တင်-အခြေခံကစားတဲ့ဆိုဒ်များရှိသည်ကိုနာခံသည်၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမမှဘန်ကီမွန်းက။ အခုတော့၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အကည္လင္ျပတ္သား၍ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောလော၊ထိုအခါသင်သည်အနည်းဆုံး ၁၈ အသက်အနှစ်။ ကောင်းစွာ၊ဒီအသိသိသာသာအဘို့ပြုကျင့်တရားအကျိုးဆက်။ သို့သော်၊အောက်မေ့သောအချို့နိုင်ငံများတွင်ရှိသည်သောရှိစေခြင်းငှါ၊အဆင့်မြင့်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ရန်၊ဒါကြောင့်စစ်ဆေးစတင်မီသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ကဲ့သို့ဆိုက်များကို ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်နှင့်သင်ဖို့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်းပုဂ္ဂိုလ်၊အစဉ်အမြဲအောက်မေ့အ ။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များ။ ကျပန်းတီချက်တင်ဆိုဒ်များချင်ကြပါဘူးသူတို့ဖောက်သည်များနှင့်အသုံးပြုသူများအဖို့ရူးသွပ်သွားသောကြောင့်အချို့မျိုး။ ထို့ကြောင့်၊အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်နှင့်ဖြစ်စေမသင့်လျော်သောအမူ၊မဟုတ်ရင်သင်ချက်ချင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်အတြက္ရဲဘန်ကီမွန်းက။ နှင့်အညီသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေအမည်မသိ၊အားလံုးဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲမပုံမှန်အချက်အလက်မျှဝေ။ ဤသင်တန်း၏၊အစပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားအမှုအရာမလိုအပ်။ ထို့အပြင်၊ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်သောအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်သင်ကမကြိုက်ဘူးသို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့အချို့ကိုပြောပြရန်ကျပန်းစိမ်း။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်သွားဖို့လာမယ့်ရရှိနိုင်တဲ့အသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ရိုးရိုး။ ချက်တင်ဆိုဒ်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းကင်မရာအကြားတွင်တည်ရှိသည်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်သင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမျိုးသမီးများအွန်လိုင်းထံမှကွဲပြားခြားနား။ တချိန်တည်းမှာ၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊စပိန်နိုင်ငံ၊ကနေဒါ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊နိုင်ငံများနှင့်အတူဂျာမဏီနဲ့တူအတွက်ကျပန်းချက်တင်၊အသုံးပွုနိုငျချက်တင်ပလက်ဖောင်းရရှိနိုင်ပါသည်အတွက်ဗီဒီယို။ ရုပ်သံချက်တင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကောင်းတစ်ခုဝယ်ဖို့အချိန်ဆောင်းတွင်းအဝတ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြစ်စေခြင်းငှါမီဆောင်းတွင်း၏အဆုံးသည်။
များသောအားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ တချိန်တည်းမှာပင်အတွက်။ နှိပ်ပါအခန်းပေါင်းမှတဆင့်နှင့်အတူလာ။အခြားအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ပုဂ္ဂလိကအဆက်အသွယ်။ စာစောင်ထပ်မံနှင့်အတူလာအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်ခရီးစဉ်မှတဆင့်ချက်တင်အသုံးပြုမင်းချက်တင်အဖြစ်ဆက်သွယ်ရန်-ဒါလွယ်ကူသောအဘို့ချက်တင်၊အများအတွက်ရောနှင့်လိင်ဆက်အသွယ်သင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွစကားပြော၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အချိန်တိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ချက်တင်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်သောသူဖော်ရွေမှုကလူမျှဝေချင်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူ။ သင်အသုံးပွုနိုငျသောဒေသဆိုင်ရာအဆောက်အဦ။ အပြင်မြို့ကြီးများဘာလင်၊မွှေးသို့မဟုတ်အမြူးနစ်၊စခန္းမ်ားအတြက္ သေးငယ်တဲ့ဒေသများသင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌။ သင်မြင်သောအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အခန်း။ သို့မဟုတ်၊သင်နှိပ်နိုင်သည်ပေါ်တိုက်ရိုက်"မဝင်ရ"နှင့်သင်၏အလယ်၌။ အပူစိတ်ကူးစိတ်ကမ်း၊သို့မဟုတ်သင်အလိုအတွေ့အကြုံအနေနဲ့နှိုးဆှအခန်းကဏ္ဍကို-ကစားအတွက်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ လှောအပူအခန်းပေါင်းအတွက်စာရင်းကိုအပေါ်လက်ဝဲဘက်သို့မဟုတ်ဖန်တီးသင်ကိုယ်တိုင်တစ်ဦး။ 'ပုဏ္ဏားစိတ်ကူးယဉ်'၊'မောင်သူ့ကိုရှာနေ'သို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းအိမ်မှာ'ထိုအခန်းများ၌။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်တန်း၏၊စကမ်နှင့်အတူ။ အဖြစ်တစ်ဦးအခန်းဖန်ဆင်းရှင်၊သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်လမ်းဖြင့်၊သောအဖွဲ့ဝင်များကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်၌အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊သင်ဦးတည်အပူစကားပြောကြားလေးမျက်စိ။ သင်ရိုးရှင်းစွာပေါ်တွင်နှိပ်ပါ'ေရာ'လုပ်ပြီး၊သင်အဖြစ်ကောင်း၊မပင်သိချင်နေတာ။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊သင်သည်လည်းတစ်ဦးကမ်စကားဝိုင်းစတင်ဖို့။ ဤသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်မြန်ထက် သို့မဟုတ် ။ ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ပြုပါရန်နှင့်တိုက်ရိုက်အဘယ်သူ ။ ထုတ်ကြိုးစားအတွက်ဂျာမနီ၊ဂရိတ်လိင်ချက်တင်။
မြို့ပေါ်တယ်"မြို့၏သီချင်း-"ဒေသခံများအတွက်မှတ်ပုံတင်မြို့ချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်ကို"။ သင်တို့အပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် ၁၈ အသက်အနှစ်နှင့်အသင်အဘို့အရှာကြသည်မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းဖို့ချင်သူ"သီချင်းဆိုပေါ်တွင်ဗီဒီယိုချက်တင်-"ဟဲလိုမိန်းကလေး-အမျိုးသမီးကျော် ၃၅ နှစ်အရွယ်တွင်အလိုရှိသော"ထူးပြောစရာမရှိအပေါ်အသုံးပြုသူ၏ဂျင်း"မဂၤ အလိုရှိသောအရေအ အတွက်ပရိုဖိုင်များ၏တူညီသောအရပ်"ပေတရု ထူးပြောစရာမရှိအပေါ်အသုံးပြုသူလျှင်မသုံးပါခဲ့ဘူး၏ပရိုဖိုင်ကိုလုပ္ကိုင္ခဲအဖြစ်ကုန်ကြမ်းနှင့်တက်ကြွစွာချိတ်ဆက်ဖို့မြို့ပေါ်တယ်"သီချင်း- စီးတီး"။
အသက်အရွယ်၏အမျိုးသမီး -၅၉ နှစ်-ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နှင့်ပင်ဆောင်အဆစ်အပန္းေျ၊လာရောက်လည်ပတ်စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေ၊စသည်တို့ကို။ထိုကဲ့သို့သောအထီးနေသောအကြောင်းစဉ်းစားသည့်အလုပ်။အသက်အရွယ်၏ဤအမျိုးသမီး-၅၉ နှစ်-ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နှင့်ပင်ဆောင်အဆစ်အပန္းေျ၊လာရောက်လည်ပတ်စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေ၊စသည်တို့ကို။အလားတူအထီးအကြောင်းစဉ်းစားသည့်အလုပ်။ မြူးနစ် ၊စုန်းမ၊မှော်ဆရာ။ အဖြစ် မြင်နိုင်ပါသည်၊သင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွေး။ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊လွယ်ကူသောကြောင့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အလုပ်၏အမျှောဖယ်ရှားပစ်ရန်အရာဝတ္ထု၏ရောဂါအခြေအနေ၊အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားပျက်၊ဆောင်၊တစ္သက္။အပြစ်၊ဖၚျ၊မှော်ဆရာ။ အပြစ်၊ဖၚျ၊မှော်ဆရာ။ အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ အစုန်းအတတ်စုန်းတွင်တစ်ရွာဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်လုပ်ပါ၊ပစ္စည်းများ ရောဂါအခြေအနေ၊အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားပျက်၊ဆောင်"ဆောင်"၊ပြစ်ဒဏ်။ အာဏာ၏ရိုးရာဓလေ့များ၏တောင်းဆိုမှု၊ငွေပေးချေလက်ဆောင်၊ငါပြုရန်ရှိသည်အလုပ်၏တယောငွေပမာဏ၏မှောင်မိုက်တန်ခိုး၊အုပ်။ ကိုယ့်အတိုင်းမျှောနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်နတ်ဆိုး၊ဒါကြောင့်အသက်ဝိညာဉ်ကိုအသေကောင်၏၊ဒါကြောင့်မည်သည့် ။ အားလုံးလူသိများနှင့်အမည်မသိစနစ်အကြှနျုပျ၏အရည်အချင်း။ လူ၏အကြံအစည်ဘာမှမလုပ်နိုင်။ တွေအများကြီးလည်းရှိ၏သောအစဉ်ခြေရာခံ။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်စွာဦးတည်ပြောင်းလဲအဖြစ်အပျက်။ အားဖြင့်လုပ်နေနှင့်ပေါင်းစပ်ငါ့လေ့ကျင့်ရေး၊မှော်လောကအတွက်။ သင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်၊ကျေးဇူးပြုအကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လက်ခံငွေနှင့်လက်ဆောင်လာအဲ့မှော်လုပ်။ သင်၏ခရီးမှာရှာ၏သားသမီး ၄၅ အသက်အနှစ်အောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအသက်ရှင်နေထိုင်လိုသူအမြဲတမ်းအတွက်မြူးနစ်မကျော် ၅၀ အသက်အနှစ်၊ဒါပေမယ့်လည်းအပေါ်အားကစားသဘောမျိုးဟာသ၊ဝါသနာနဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဘဝအသက်တာအနက်ဆက်ဆံရေး၊သင်လှုပ်ရှားမှနွေးထွေးခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်သင်၏စာရေးဆရာကိုအခြားအဓိကမြို့ကြီး။ ခရီးအကြာအတွက်နေရာရှာ၏အမျိုးသားကျော် ၅၀ အသက်အနှစ်ကနေအဆက်မပြတ် မြူးနစ်အမျိုးသမီးတွေကိုအောက် ၄၅ သူမှာအကောင်းဝါသနာနည်းလမ်း၏အားကစားသဘောမျိုးနဲ့ဟာသကိုခံစား၊အောက်ကလေး ၄၅ စေ ပူနွေးနှင့်ဆက်ဆံရေးနွေးထွေးအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဗင်အိမ်မှာရ-အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘိဥာဏ် တိုက်ခိုက်ခြင်း:လူတစ်ယောက်သည်ရှိရမယ်လက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံအတွက်ဤနယ်ပယ်တွင်။ ရိုးရာဓဒင်ဟော၊နိမိတ်။ မိသားစုကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အားယား၊ငါ့အချစ်။ ဖုန္းေခၚမည္သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုရေးသား။ ဥာဏ်၏တိုက်ခိုက် ။ နှင့်အတူလူတစ်ဦးနှင့်အတူလက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံ။ ရိုးရာဓဒင်ဟော၊နိမိတ်။ မေတ္တာမိသားစု။ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသည်ယား၊ငါ့အချစ်။ ဖုန္းေခၚမည္သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုရေးသား။ ကနေတဲ့လူတစ်ယောက်လိုသူကောင်းစွာတုံ့ပြန်ဖို့ဆောက်လုပ်ရေး၏လယ်ပြင်နေ့ ၅၇ နှစ်၏လှပသောအမျိုးသမီး ၅၅-၆၅ နှစ်၏ဂျာမနီနဲ့သြစတြီးယား။ သေချာ။ သင်မည်။ ရက်ရက်ရောရောစု။ ငါသည်လည်းဖြေချင်များဆောက်လုပ်ခြင်း၊အားကစားအစည်းအဝေးလှဂျာမန်အမျိုးသမီး ၅၇ နှစ်အရွယ်နှင့်အမျိုးသားများ ၅၅-၆၅ အသက်အနှစ်-ဂျာမနီနဲ့သြစတြီးယား။ ငါကူညီပျော်ရွှင်လိမ့်မည်သင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးဂရုတစိုက်စဉ်းစားပါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်သင့်မိသားစု၊အလုပ်၊စသည်တို့ကို။ အကွာအဝေး၊ပျက်စီးမှု၊မျက်စိအဘို့မကောင်းသောအ။ ဖွင့်လို့ရတဲ့လမ္း၊ခံေပ်ာက္အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ကနေပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေး၊အညစ်အပြန်အချစ်မှော်၏အထွေထွေအဖြေ"မျက်စိ၊ခင်ပွန်းသည်က၊ဖယ်ရှား၊အနတ်ဆိုးသည်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ၊ကွယ်မှမှော်မှော်-သင်ကူညီလိမ့်မည်ရွင္း၊မိသားစု၊အလုပ်၊ပျက်၊ချစ်၏မျက်စိဆိုးသေချာစွာစုံစမ်း"။ ဖွင့်လှစ်လမ္း၊စင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိမ်းချက်ပြုတ်မှပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း၊ခပ်ပြန်ချစ်မှော်အခုံဖြေရှင်းနည်းများကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့"မျက်စိ"၊ကိုဖယ်ရှားငါ့ပြိုင်ဘက်၊နတ်ဆိုးဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုကာကွယ်မှော်မှော်။.
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ယခုရှိ၏တစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုဒေသခံလူထုနှင့်ဤအသစ်အခွင့်အလမ်း:သတင်းလွှာကိုပေးပို့-သတိပေးချက်များကိုအားလုံးလစဉ်သူစုဆောင်းသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းနှင့်အခမ်းအနားအတွက်အမိုင်နို။ ဤအသစ်အင်္ဂါရပ်များ:သတင်းလွှာကိုပေးပို့-သတိပေးချက်များကိုအားလုံးလစဉ်သူစုဆောင်းစိတ်ဝင်စားစရာအမိုင်နိုအကြောင်းအရာနှင့်။ အလွယ်စေလွှတ်မည်-ကဲ့သို့သော ပန်ကြား၏အကြံအစည်မည်သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်၊ဒါကြောင့်သာမန်လူတွေမတာဝန်ရှိကြောင်း၏ဖြစ်ရပ်အ နှင့်လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၊တွေ့ကြုံ။ အသုံးပြုသူအမည်:လက်စ်မင်္ဂလာပါ။ မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ၊ငါလမ်းလျှောက်ဆင်းလှေကားကိုအမြဲဒီဆက်ဆံရေး။ မယ်မေးဖြေဖို့သင်သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်း:အစဉ်မပြတ်ငါသက်သာခံစားရတဲ့အခါကျွန်မအတွက်သင်ဟာကြည့်ရှုပါ"မွန်"၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်မည်သို့ဟာသ-မင်္ဂလာပါ၊ငါလမ်းလျှောက်ဖို့မော်စကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှ၊ချက်တင်၊စသည်တို့ကို။။။∞ဆာဌ∞။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအမှတ်တွေ့မြင်။ ကိုယ့်တယ်။ ကျွန်တော်အဝါရောင်။ ကျေးဇူးပြုပြီးသုံးပြီးကြိုးစားမှ။ ဤဖြစ်ရပ်သည်ဆိုပါက၊ထို့နောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ငါချင်ပါတယ်ခုတ်ဖို့ငါ့မိတ်ဆွေ'ဆံပင်၊ဆံပင်ညှပ်ရတဲ့အ၊သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို။
ဥပဒေအထောက်အကူကားတစ်စီးမတော်တဆမှု ရှေ့နေများကမတော်တဆထိခိုက်နိုင်လိမ့်မည်တည်ထောင်ရန်တရားမျှတမှုအတွက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအပေါ်လမ်း ယနေ့ခေတ်မြန်နှုန်းနှင့်တိုးမြှင့်အသွားအလာအတွက်အဓိကအမြို့မြို့အခြေချ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းလမ်း၏မျက်နှာပြင်၊တိုင်းနီးပါးယာဉ်မောင်းမှာအနည်းဆုံးတကြိမ်ဖြစ်လာပါတီမှမတော်တဆဖြစ်သူတို့၏အမှားသို့မဟုတ်အားဖြင့်တိုက်။ မည်သည့်မတော်တဆသာဖြစ်သည်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ကြောက်ရွံ့၊ဒါပေမယ့်လည်းအပျက်များ၏ကျန်းမာရေးယာဉ်မောင်းနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာ၊ယာယီအရှုံးများ၏စွမ်းရည်နှင့်ယာဉ်မောင်းနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပစ္စည်းပျက်စီးဖို့ကား။ စက်ဆီ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်အတွက်နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းမိသားစုကားပိုင်ရှင်။ ဆင်းရဲ၏ကားမောင်းလိုင်စင်အဘို့အ၊ဤအပြင်းထန်ဆုံးအပြစ်ဒဏ်များအတွက်ချိုးဖောက်သွားအလာ၏။ ထို့ကြောင့်တိုင်းနီးပါးမှု၊ယာဉ်မတော်တဆမှုလိုအပ်၏အကူအညီသည့်ရှေ့နေများအတွက်ယာဉ်မတော်တဆ။ တစ်ဦးအရည်အချင်းရှေ့နေလိမ့်မည်တို့အတွက်မတော်တဆနှင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက် တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်ရှေ့နေများအတွက်ကားတစ်စီးမတော်တဆမှုလိုအပ်သည်၊နီးပါးချက်ချင်းပြီးနောက်အဖြစ်အပျက်၊မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျောင်းအုပ်ကြီးရာမ်ိဳးသားကောင်အတွက်မတော်တဆ။ အကျွမ်းနားလည်တဲ့ရှေ့နေများအသွားအလာမတော်တဆမှုဘုတ်အရှေ့နေများကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံအတွက်ဒီဒေသ၏ဥပဒေနှင့်နိုင်လိမ့်မည်ဖြေရှင်းရန်မည်သည့်အငြင်းပွားကိုရည်မှတ်အသွားအလာအခြေအနေသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်။ တစ်ဦးအရည်အချင်းမတော်တဆရှေ့နေရန်ဆုံးဖြတ်မေးခွန်းအားလုံးကိုချက်ချင်းအလုပ်လုပ်အတွက်ဥပဒေကြောင်းအရ။ ချက်ချင်းပြီးနောက်လိုင်းအထူးကုအဖြစ်လေ့လာအစီရင်ခံစာရေးဆွဲတက်ခြင်းအားဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများ၊ပေါ်ပေါက်အာမခံစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို။
ကမ်။ ဒေါင်းလုပ် ေအန္း
အကေးရှင်းကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်နှင့်သင်တစ်စုံတစ်ဦးမှဆက်သွယ်ပြောဆို။ ကျွန်တော်တို့ကွတ်ကီးများကိုသုံးပါအားပေးနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောနေရာ။ အားဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၊လက်ခံအဲဒီ၊ဒီနေရာမှာသင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါက
အဆိုပါကုမ္ပဏီ ဏာကိုဌား။ ဒါဟာထုတ်လုပ်သူ၏ဇယ္၊နှင့်ထိုသူအချို့နှစ်ပေါင်းများစွာခဲ့ပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်နာ္ဇယ္ဒြပ်စင်များ၊ပစ္စ၊အစာကျွေး၊ဘာသာျပန္ခ်က္၊ဟတ်ဦးခေါင်း၊ဖစ္သျပန်းကန်၊ကူရိုး၊အစာကျွေး၊၊စုပ်စက်၊ဒီဇယ်၊ ယူနစ်နှင့်တော့။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ် ။ ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့ကုန်ဌာနများအတွက်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်ကလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအထူးပြုအဆောက်အဦးအပြင်ဖိုင်ဘာကြိုးထုတ်လုပ်သူတရုတ်အတွက်၊တစ်ဦးအပြည့်အဝအကွာအဝေးအတွင်းအပြင်ဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်ကြိုး၊အဖြစ်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။ ဤအဆောက်အဦးအပြင်ဖိုင်ဘာနန်းလည်းအသုံးပြုနိုင်ချိတ်ဆက်ဖို့အမိန့်အလယ်ဗဟို ဖို့။ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ။ ကျနော်တို့ပူဇော်ပြင်ဆင်ဒီဇိုင်း၏မြင်ကွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်လိုက်လျောညီထွေ၏လျှောက်လွှာအထူးမီး။ ငါတို့သည်လည်းပူဇော်င့္ခ်င္းတည်ဆောက်ဖို့ပေါင်းစပ်အခြားအစိတ်အတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ဂျူးသို့မဟုတ်စပ်၏။ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို၊သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အစဉ်အဆက်တွင်စိတ်ဝင်စားခရီးသွားလာနှင့်ပြည်ပမှာနေထိုင်နေအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့၊ထို့နောက်မဟုတ်ကြဘူးမဆိုထပ်မံကြည့်ရှု။ ကျွန်တော်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်တန်းကုမ္ပဏီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြနှင့်အတူနိုင်ငံခြားရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်ဆရာအစဉ်အဆက်ကတည်းက။ ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ရှိသည်လှဆိပ်ကမ်းမြို့တော်ဖြစ်ပါ၏၊အကြီးဆုံးတရုတ်နိုင်ငံအတွက်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံစစ်မှန်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၊နှင့်အတူအားလုံးအပိုဆောင်းဆုကြေးငွေခဲ့ကြကြောင်းမွေးရာအားလုံးအတွက်နိုင်ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤသင်တို့အဘို့အရာ။ ကျနော်တို့အလုပ္အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး၊ဒါကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့မေးခွန်းတွေမေးမြန်းဖို့၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမည်။ -(ရှန်ဟိုင်း)အဌားတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောမြို့တော်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ ကျနော်တို့ကလူသန်းပေါင်းများစွာနှင့်၏ဧရိယာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံ?။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်ထုတ္လုပ္သူနှင့်လိမ္နှဆီတံဆိပ်၊-လက်စွပ်၊-လက်စွပ်၊ရော်ဘာကပ္၊ နှင့်အမျိုးမျိုးရော်ဘာထုတ်ကုန်များအတွက်အသုံးပြုမာ္ေတာ္ကားရားမ်ား၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊အဏ္ဏဝါနှင့်အဏ္ဏယန္တရား၊စက်ပစ္စည်း၊စိုက်ပျိုးရေးယန္တရား၊အားကစားဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်း၊ကျနော်တို့လျှောက်ထား:နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စာမေးပွဲ၊နှင့်ကျနော်တို့လက်မှတ်၊ကျနော်တို့ရရှိသောပြဲကိုလက်မှတ်နှင့်အကောင်အထည်ဖော် စီအစဉ်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းဒေသ။ ကော်ဖီရောင်းရန်အတွက် သို့မဟုတ်ကော်ဖီရောင်းရန်အတွက် ၊ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာလစ်သူယေး။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တမ်း:အဘို့။ ယူရိုနှုန်း။ ယူရိုနှုန်း။ ယူရိုနှုန်း။ ဘွတ်ယူရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်တဲ့အနိမ့်ဆုံး။ ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုအတွက်ယူရိုငွေအဖြစ်အပ်။ အပိုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ဖို့အမြတ်အစွန်းကနေကော်ဖီအကြောင်းကိုအာရ်။ အနိမ့်ဝင်ငွေ၏ကိုယ့်တဦးတည်းယူရိုႏွကိုဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်အမြတ်အစွန်းနှင့်အတူစုစုပေါင်းဝင်ငွေ က-တစ်ယူရိုတစ်နေ့လျှင်၊ နှင့်အတူအမြတ်အစွန်းများ၏တဦးတည်းယူရိုငွေတစ်လလျှင်။ အဲဝန်ထမ်းများကို။ တစ်ဦးရှိပါတယ်နှိုင်းယှဉ်အတွက်အရက်။။။။။ ကျနော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတွင်တည်ရှိသည် နှင့်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီအတွက်လစ်သူယေးဖြစ်န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောပည္ေထာင္စု၏ကုမ္ပဏီသည်။ ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအဘို့အသင်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအမျိုးအစားများအသင်းဥရောပအပေါ်အခြေခံစီးပွားရေးလုပ်နေအတွက်ဥရောပနှင့်ဝယ်ယူရှယ်ယာများအတွက်ကုမ္ပဏီ။ အပေါ်မူတည်၏အရွယ်အစားနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်သင်၏အကျိုးစီးပွား၊ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုသင်တို့အဘို့။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်တစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကုမ္ပဏီများအတွက်၊နှင့်ငါတို့သည်အဆင်သင့်ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီးပွားရေးဥရောပ(ဖ်)သည်အသစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူဥရောပသမဂ္ဂများအတွက်လိုင်စင်ကိုနိုင်ငံတကာကုန်တင်ျဖစ္သည္။ ဘဏ်မှအကောင့်ဖွင့်လှစ်အောင်၊တစ်တံဆိပ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဖို့တရားဝင်။ စီးပွားခြင်းမရှိဘဲအကြွေးမှပြည်နယ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ဝတ္တရားများမှဘဏ်များ။ စျေးနှုန်း: ရန်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အကြံဉာဏ် ကျနော်တို့ကူညီသင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုင်စင်။ ကျနော်တို့ကအာမခံချက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဝန်ဆောင်မှု၊အရာ၊အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံ၏လယ်ပြင်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏လိုင်စင်။ ထိုသို့ပြု။ ပြင်ဆင်နေသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဥရောပ(ဖ်)အတွက်ရောင်းချခြင်းဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်အဆင်သင့်လုပ်စီးပွားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်သင်အလွယ်တကူနဲ့လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။ ကုမ္ပဏီကပြီးသားတစ်ဦးကလက်ရှိအကောင့်ကိုအတူဘဏ်မှလည်းအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဘဏ်အကောင့်။ အထံတော်၌နှစ်ဦး၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ။ ကုမ္ပဏီများအပြည့်အဝထားစာရွက်စာတမ်းများကို၊တစ်ပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီ။ အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်၊ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြီးသားပါဝင်သည်အားလုံး၏ကုန်ကျစရိတ်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်နှင့်စီးပွားရေးဖလှယ်အဘယျသို့။ စားသောက်ဆိုင်ဥရောပတိုက်တွင်ရောင်းရန်(ဖ်)တစ်မူထူးခြားသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတွက်တစ်မူထူးခြားတဲ့စတိုင်။ တမြို့လုံးတွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲအတွက်နေရာယူကြောင်းအဆိုပါစားသောက်ဆိုင်တဆိုင်အပတ်တိုင်းဆွဲဆောင်နှစ်ဦးစလုံး ႏိုင္ငံျခား။ စားသောက်ဆိုင် ဒါဟာရေပန်းစားသည်နှင့်အတူခရီးမွအမွားမ်ား၊အက်စ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအဆက်မပြတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖွံ့ဖြိုးရေး၊မြှင့်တင်ရေးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုများ၏အမှတ်တံဆိပ်၊နှင့်အရေအတွက်ဖောက်သည်များ၏ကြီးထွားလာသည်။ စားသောက်ဆိုင်တြထဲကငှားရန်းမှာအထူးအစျေးနှုန်း၊တိုးပွါးသော၎င်း၏အမြတ်အစွန်း။ အငွားစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခဲ့ပါသည္။
အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများ အားလုံးအလုပ်သမားအငြင်းခွဲခြားနိုင်ပါသည်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောခိုင်ခိုင်လုံလုံ။ အမျိုးအစားများအလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများဖြင့်ခုတ်တီ: တစ်ဦးချင်းအလုပ်သမားအငြင်းအခါ သူတို့အကျိုးသက်ရောက်၏အကျိုးစီးပွားချင်းအလုပ္သ; စုပေါင်းအလုပ်သမားအငြင်းပွား တျတစ်ခုလုံးကိုအင်အား(ဥပမာအားဖြင့်၊ပျက်ကွက်မှုဖြင့်အလုပ်ရှင်စုပေါင်းသဘောတူ)သို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်း(သီးခြားအဆောက်ခရိုင်)။ အမျိုးအလုပ္သနိုင်ငံများသောသူတို့သည်ထ(ထဘာသာရပ်အနေဖြင့်အလုပ်သမားများ၏ဥပဒေ): ၁။ အလုပ္သမားအျငင္းဟူ၍အမိ၏အလုပ်အကိုင်ဆက်ဆံရေး(ဥပမာအားဖြင့်၊ဒါပေမယ့်မ-ငွေပေးချေမှုများ၏လစာ၊တရားမဝင်ထုတ်ပယ်ခြင်း၊နှောင့်နှေးထုတ်ပေးရန်အကိုင်အခွင့်အစံချိန်၊စတာတွေ); ၂။ အလုပ်သမားအငြင်းပွားခြင်းမှာအမိ၏မောင်ထံသို့တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်အလုပ္သမား၊ဆိုလိုသည်: ဟူ၍အပြို၏ဆက်ဆံရေးဒါပေမယ့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်သမား။ ဥပမာအားဖြင့်၊အလုပ်ရှင်နှင့်အလိုအကောင်အထည်ဖော်အလုပ္သစံ၊မအားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနည်းပညာလုပ်ငန်းစဉ်၊သို့မဟုတ်လိုအပ်သောအားလုံးထုတ်လုပ်မှုလုပ်န်ထမ်းဆောင်မှာအရှိန်အဟုန်အလွန်ပုံမှန်မြန်နှုန်း၏တာဝန်များကိုဆောင်၊သို့မဟုတ်မလွှတ်ဝန်ထမ်းအလုပ်ကနေတိုင်အောင်မဖြည့်ဆည်းထုတ်လုပ်မှု၊စတာတွေ၊ နှင့်ဝန်ထမ်းတရားရုံးတွင်အသိအမှတ်ပြုရှိသည်ဤတောင်းဆိုချက်များမှာတရားမဝင်; ဟူ၍ဖောက်မှုဆက်ဆံရေးအတွက်အလုပ်ရှင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ထိုတရားရုံးအဖြစ်မေတ္တာအငြင်းအလုပ်အကိုင်; ဟူ၍အပြိုမှုမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး။ ဥပမာအားဖြင့်၊အလုပ်ရှင်ပါဘူးဂျစ်စုပေါင်းသဘောတူညီနှင့်ဝန်ထမ်းတရားရုံးတွင်လိုအပ်သောကွပ်၎င်း၏ပြဋ္ဌာန်း။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ဒီဖောက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတစ်ဦးစုပေါင်းအလုပ်သမားအငြင်း၊ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီးအသီးအသီးထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ; ဟူ၍ဖျန်ဖြေ၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်အစိတ်အပိုင်းဝန်ထမ်း(သို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ)၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဖွဲ့အစည်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊အလုပ်ရှင်ချမှတ်ဒေသခံစည်းမျဉ်းများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်မပါဘဲအဓိကကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း; ဟူ၍အပြို၏ဆက်ဆံရေးကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင္တန္း၊ နှင့်အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ရေးများအတွက်အလုပ်ရှင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အလုပ်ရှင်လိုအပ်သောဝန်ထမ်းဆပ်ဖို့မိမိအခကြေးငွေသို့မဟုတ်ထူထောင်တစ်ပးခ်ိန္၊အပေါ်မှာအအောင်မြင်သင္ယူ; ဟူ၍ဖျန်ဖြေ၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်ပစ္စည်း၏တာဝန်သည်အလုပ်သမားစာချုပ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊အလုပ်ရှင်တစ်ချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်အလုပ်သမားဥပဒေအတိုးဝန်ထမ်းအပြည့်အဝအပျက်အတွက်ပိုလျှံ၏သူပျမ်းမျှလစာ၊အားဖြင့်၎င်းအမိန့်တော်; ဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ဖောက်၏တစ်ဦးဆက်ဆံရေး၏ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်။ ဒါကြောင့်၊အလုပ်ရှင်နှင့်ဝန်ထမ်းယူခံနိုင်ဆန့်ကျင်တရားမဝင်၏လျှောက်လွှာ၏အစီအမံအုပ်ချုပ်တာဝန်များကိုချိုးဖောက်များ၏စံချိန်စံညွှန်းအလုပ္သမားအကာအကွယ်၊အတီအယူခံဆန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရပ်အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမတော်တဆမှုလျှင်၊သူတို့ကသဘောမတူ၎င်း၏အကြောင်းအရာနှင့်တွေ့ရှိ; ဟူ၍ဖျန်ဖြေ၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုများ။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ပါတီအမည်ပါဘူးသူတစ်ဦးနှင့်အတူသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ကော်မရှင်အလုပ္သမားအျငင္းပြားအယူခံဆန့်ကျင်ဒါဟာတရားရုံးနှင့်အလုပ်ရှင်အတွက်တရားရုံးမှအသိအမှတ်သပိတ်တရားမဝင်; ဟူ၍ဖျန်ဖြေ၏ဆက်ဆံရေးအပေါ် လူမှုရေးအာမခံ။ ဥပမာအားဖြင့်၊အလုပ်ရှင်ပေးဆောင်ဖို့ငြင်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှစ်ဦးနေ့၌အနာရောဂါစွဲထားခဲ့ပေမယ့်၊အဆိုပါဥပေဒပထမသုံးရက်ပတ်လုံးအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအဖြစ်အတင်းအဓမ္မအလှည့်အ ။
ဥပဒေရေးရာအကြံဥာဏ်တွင်ချေးငွေထုတ်ပေးရန် အဘယ်သို့ပြုလျှင်နှောင့်နှေးချေးငွေအပေါ်အကိုပေးဆောင်ရကျိုးနပ်လျှင်သင်ဆပ်ကြောင့်စာချုပ်လစဉ်ငွေပေးချေမှု. တကယ်လို့ထွက်နှင့်ခြိမ်းခြောက်စုဆောင်း. ဤရွေ့ကားများနှင့်များစွာသောအခြားမေးခွန်းများမေးမြန်းကြ၏ငွေချေးများကိုရှိခြင်းနေသောဘဏ္ဍာရေးအခက်ပြန်သွားဖို့ချေးငွေရန်ပုံငွေ။ အသီးအသီးတစ်ဦးချင်းစီကပြဿနာချေးငွေ။ အဘို့အဆင်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့အကြွေးကိစ္စလိုအပ်သောဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်အပေါ်ချေးငွေများ၊အဘယ်သူသည်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ပေးထားသောအခွအေနေ။ တစ်ခုချင်းစီကိုချေးငွေသဘောတူဘယ္မဲအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြန်ဆပ်။ ပထမဦးဆုံးအခြေချပြစ်ဒဏ်များ၊ထို့နောက်အကျိုးစီးပွား၊ပြီးတော့သာခန္ဓာကိုယ်ချေးငွေ၏။ အောက်တွင်ဤအခြေအနေ၊အချို့ငွေချေးပေးဆောင်ဖို့ချေးငွေအဆိုသဘောမျိုးလုပ်မထားဘူး။ ကတည်းကဆောင်းပါးဒကုတ်ပေးပိုင်ခွင့်အားသွင်းဖို့ဒဏ်ငွေအတွက်သင်တန်း၏ရုံးတင်စစ်ဆေး။ အချို့ဖောက်သည်များလက်ခံနိုင်ဖြစ်လာခြင်းရဲ့ရွေးချယ်စရာကိုမြီပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်အရစ်ကျရှင်းရှင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှု၊ဒါခေါ်"အားလပ်ရက်အကြွေး"။ အရပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရမည်လျှောက်ထားရန်ဘဏ်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာတရားဝင်အီးမေးလ်၊အရာလည်းကူညီမှရှေ့နေလုပ်သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါပါတယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်အပေါ်ချေးငွေများအတွက်တရားစွဲဆိုနှင့်အတူ။ ပေးတဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတရားရုံး၊ဘဏ်များသိသိသာသာပမာဏကိုတိုးမြှင့်ကြွေးမြီမှတဆင့်ကမ်းဒဏ်ငွေ။ လျှင်ငှါးထားသောကဏ္ဍအနေအထားသို့မဟုတ်မသွားပါဘူးတရားရုံးကကြားနာ၊ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ကြစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊ထိုကြွေးမြီ၏ပမာဏကိုတိုးမြှင့်နိုင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ. ပါကဘဏ်အယူအငှါးတရားသည်မမြဲဖြစ်ဆိုးကြောင့်ထင်ပထမတစ်ချက်မှာ။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပျောက်ဆုံးနေဘဏ်တ္တန့်သတ်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အနိုင်ရနှင့်ထွက်လာ။ အရေအတွက်ရှိပါတယ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးချုပ်။ ထို့အပြင်တရားရုံး၏ပထမဦးဆုံးဥပမာမည် ၂-၅ ကာလ၏ပမာဏကိုလျှော့ချပြစ်ဒဏ်များ၊ဒါပေမယ့်ဒီရှိရမည်ဖော်ပြထားသည့်အတွက်ရေးသားကန့်ကွက်ကူညီလိမ့်မည်ဟုအောင်ရှေ့နေတစ်ဦးချေးငွေများ။.
သူကအပေါ်သို့လဲသူမတနေ့အပေါ်ကွင်းကို၊အစဉ်အဆက်ကတည်းကထို့နောက်သူတို့မိတ်ဆွေများဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ခဲ့သည်၊သူတို့၏ရန်သူအဖြစ်သူတို့ကြီးပြင်းအပြင်သို့သီးခြားရည်မှန်းချက်၊အခုတော့သူတို့ဟာလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုသွားရာလမ်းတဖန်တက်ရောက်အတူတူ။ ညဦးနေဟုတ်တယ်၊ငါဃအစားများနှင့်အတူမူလစာမျက်နှာမှာငါ့မဂ္ဂဇင်း။ တစ်ဦးဆံပင်ရွှေရောင်မိန်းကလေးမြည်တွန်ထိုင်ကပ်လျက်။ ဘာခရစ္စမတ်ချိုးဖျက်ဖို့ရှိသည်၊အဆုံးအောင်အစာရှောင်? သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့် ပြီးနောက်ကိုပိတ်? ဒါကြောင့်နှောင့်အယှက်။ အို ထိုင် တက်ဖြတ်သူမ၏လက်နက်ကိုစိုက်ကြည့်မိန်းကလေးအတွက်တယ္တဲ့။ သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ် င့္ပါတ္သတ္ေသာအေသးတယ္။ ဒါဟာဆာဟာမွေးနေ့ဝိညာဉ်တော်သည်။ ညဦးတိုးတိုးဖို့အတွက်အချက်ကိုတဲ့ကိစ္စလေ။ သူမ၏အမည်ကိုဆိုလိုသည်ချယ်ရီပွင့်ဒါကြောင့်ဃသဘောမျိုးလုပ်သူမ၏မွေးနေ့သည်နွေဦးပေါက်ရာသီအတွက်။ သူပင်ပိုမိုပျော်ရွှင်ကြောင့်ကျောင်းကိုအကြောင်းနွေဦးပွဲတော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူမ၏မွေးနေ့အပေါ်။ ရွှေရောင်အနစ္မြန္း နှင့်အတူပြုံးခေါက်သူ့လက်မောင်းနောက်သူ၏ဦးခေါင်းကို။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲကြီးမားတဲ့သဘောတူ။ ဆာဟာမွေးနေ့? ဒီတစ်ခါလည်းငါရသင့်တစ်ခုခုတကယ်အထူး။ သောပွဲတော်သည်သာလအနည်းငယ်ကွာ။ ဒေါ်တွေးကြည့်တက်မှာမိန်းကလေးခဲ့သူအားလုံးအပြုံးနှင့်အတူသူမ၏အကောင်းဆုံးရည်းစား။ ငါသူမရဲ့အံ့သြဖွယ်ရာတစ်ခုခုအားဖြင့်သို့ဖြစ်။ အဘယ်သူမျှမရှိ။ သူမ အိပ်ကျော်မှာအိုသည်တနင်္ဂနွေအဘို့ဒါကြောင့်မိမိတို့အိမ်အတူတူ။ ဒေါ်ပာအေမအတွေးမှာ။ ငါရှာဖွေအနည်းငယ်ငြူ? သူ့အစ်ကိုမေးကဗ်ာေဦးဆောင်လမ်းနေအိမ်။ ကျေးဇူးတင်ဒါကြောင့်တစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်သူမသည်အသုံးစရိတ်သူမတနင်္ဂနွေနှင့်အတူ။ ကောင်းစွာကတည်းကကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အတွက်တူညီ လူတန်းစားငါလမ်းလျှောက်ဖို့ကျောင်းငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်။ စိုင္းတုန့်ပြန်။ သို့သော်လျှင်ပင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်တူငါနေဆဲအကြောင်းကြား။ ငါအကြောင်းကြားအခင္းျ မိန်းကလေးပြီတော်တော်လေးနီးစပ်သောအလွန်အမင်းငါ့ထံသို့ထိတ်လန်။ ငါကြားရသူမ၏ရည်းစား။ စိုင်းဆက်ဟောပြောဖို့။ ယားယံခာက္ရာအတွက်ရယ်မောနေစဉ် သွားလေ၏ကျယ်ပြန့်မျက်စိမှာမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ကြည့်ရှုသွားပုန်းအောင်းသောမျက်နှာကြီးပြင်းကြောင်းပေါ်ထား။ ငါမသိဘူး၊ငါခိုင်းတော့မေမေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ရ။ သူကပြန်ပြောသည်။ ငါလိုခငျြအဖြစ်အကြီးမြတ်ဆုံးအပြင်သူမအစဉ်အဆက်ရ။
အဆိုပါပွိုင့်ကိုအသုံးပြု။၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပို-သို့မဟုတ်-လျော့နည်းပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊စာများအားဆန့်ကျင်အဖြစ်အသုံးပြုကာအကြောင်းဒီအကြောင်းအရာမှာ'အောင်၊ကြည့်မြင့်ဗမာ။ များစွာသောလာက္ေန္ေဆာင္မႈနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာရေးသုံးလုပ္မည္ျအဖြစ်သူတို့၏မူလပုံစံ။ အဆိုပါပွိုင့်ကိုအသုံးပြု။၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပို-သို့မဟုတ်-လျော့နည်းပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊စာများအားဆန့်ကျင်အဖြစ်အသုံးပြုကာအကြောင်းဒီအကြောင်းအရာမှာ'အောင်၊ကြည့်မြင့်ဗမာ။ များစွာသောလာက္ေန္ေဆာင္မႈနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာရေးသုံးလုပ္မည္ျအဖြစ်သူတို့၏မူလပုံစံ။
စတင်ဟာသ၊အမ်ိဳးဟာသ၊ဟာသကနေယောက်ျားအကြောင်းကိုအမျိုးသားများ၊အမျိုးသားများဟာသ၊ဟာသအားဖြင့်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား- အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးအောင်ချစ်ဖို့အသီးအသီးကအခြားလိင်ပျော်စရာ။ ဒီနေရာမှာတစ်ရွေးချယ်ရေးပြက်သောအမျိုးသားများကဲ့သို့အကြောင်းအမျိုးသမီးနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအဆိုပါအမျိုးသမီး။ ဟာသ၊ဟာသနှင့်ရယ်စရာ ၊လူတွေကပြုံးပြီးရယ်။ ပျော်စရာတွေအများကြီးဖတ်မှ။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်ဒုတိယအတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှပြဿနာများင့်ရှိခဲ့၊မရှိခဲ့ဘူး။ -နေသောအရှေ့-အောင်မပြောရန်၊အနာဂတ်အတွက်အတိတ်အသီးအသီးအခြားသိ။ အ ဦး ၊အဆိုအ ။ ၊အ။ သမ္မတ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊တစ်ချိန်ကနှင့်အတူသူ၏ဇနီး၊အလယ္ေသွားရောက်ကြည့်ရှု။ အဲဒီမှာသူကပေါ်ခဲ့သည်ကြက်၏အာရုံစိုက်မှုကိုအတက်ရုံကြက်။ လူအဖြစ်ဟုဆိုသည်သူ၏ဇနီး၊ကြက်သတ်အထိအကြိမ်နေ့က၊သင်သင့် အဖြေ:ဤပြောဖို့ကျွန်မခင်ပွန်း။ အဖြစ်သူတို့၊သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသောအရာကိုအံ့ဩဒီလိုလုပ်ဖို့။ သူတို့သာမဟုတ်သဘောတူ၊ထိုအခါမူကားတစ်ဦး:ကြကုန်အံ့ဟုဆိုသည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို ဌခ်က္သူမ်ားသွားရန်၊အစားပွဲထိုးအပူနှင့်အမြဲတမ်းအနိမ့်ဖြတ်။ ပြောနှင့်ပြီ။ ဆယ်ပါးနှစ်ကြာပြီးနောက်၊သူတို့အဖြစ်၍၊သူတို့သည်နောက်တဖန်အတွေ့ဆုံခဲ့နှင့်ဩနောက်တဖန်အ၊သင်သည်အဘယ်သို့သင့်အပေါ်ဤသည်ညဦးယံအချိန်၊ကုမ္ပဏီ။ သူတို့တွေသွားသွားကြဖို့ပထမဦးဆုံး၊နောက်တဖန်မသဘောတူညီချက်အတွက်၊ထိုအခါမူကားတစ်ဦး:ကြကုန်အံ့ဟုဆိုသည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို ဌခ်က္သူမ်ား၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစားအစာအလွန်ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုစာရင်းများစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်ကောင်းအသုံးပြုသည်။ ဆယ်ပါးနှစ်ကြာပြီးနောက်၊သူတို့အဖြစ်၍၊သူတို့သည်နောက်တဖန်အတွေ့ဆုံခဲ့နှင့်ဩနောက်တဖန်အ၊သင်သည်အဘယ်သို့သင့်အပေါ်ဤသည်ညဦးယံအချိန်၊ကုမ္ပဏီ။ သူတို့ခြင်းငှါပထမဦးဆုံးခဲ့ကြသည်မဟုတ်သဘောတူ၊ထိုအခါမူကား၊တစ်စုံတစ်ဦးကဆိုသည်:ဆယ်ပါးနှစ်ကြာပြီးနောက်၊သူတို့အဖြစ်၍၊သူတို့သည်နောက်တဖန်အတွေ့ဆုံခဲ့နှင့်ဩနောက်တဖန်အ၊သင်သည်အဘယ်သို့သင့်အပေါ်ဤသည်ညဦးယံအချိန်၊ကုမ္ပဏီ။ သူတို့ပထမဦးဆုံးအထပ် ဘောတူ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတယောက်ကပြောပါတယ်:မကြာသေးမီကသင်ဖြစ်လာ၊နောက်တဖန်အတွေ့ဆုံခဲ့နှင့်ဩနောက်တဖန်အ၊သင်သည်အဘယ်သို့သင့်အပေါ်ဤသည်ညဦးယံအချိန်၊ကုမ္ပဏီ။ သူတို့တွေသွားသွားကြဖို့ပထမဦးဆုံး၊နောက်တဖန်မသဘောတူညီချက်အတွက်၊ထိုအခါမူကားတစ်ဦး:ကြကုန်အံ့ဟုဆိုသည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို ဌခ်က္သူမ်ား။ ရှိပါသေးတယ်:အကောင်းတယ်ပြောခဲ့တယ်၊ကျွန်တော်တို့ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ကိုနု၊ပြီးနမ်းဖို့။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဲ့သို့သင်ဖြစ်လို။ ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်တော့မှအချိန်ရှိသည်၊ကိုပြောပါတယ်။ မှနံနက်မှညငါအပေါ်ကွင်းဆင်းလျှင်ကျွန်မအတွက်စိတ်ဓါတ်များအတွက်၊သူမသည်သည်ဎဟေ့။ ထိုအခါသင့်ရဲ့ရိုင်ဖယ်များနှင့်အယူအလယ်၊ရင်ခတ်၊မီး။ ထိုအခါသင့်ရဲ့အမျိုးသမီးသိတယ်သူလာသင့်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဌလယ်သမားအမည်မကြဲၾက။။။။။ ထိုအခါသူနှင့်အတူသူ၏ဦးခေါင်းကိုဆွဲထားအတွက်အလေ့အကျင့်။ အစအဦး၌၊ေျပာ။ ဒါပေမယ့်သုံးပတ္အၾကာက၊အမဲလိုက်ရာသီစတင်ခဲ့၊နှင့်ထိုကတည်းက၊ငါသည်မမြင်။ ကမကောင်းဘူး၊ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံရန်၊ဒါဟာပြောသင့်:အလာ ယောက်ျားနှင့်အတူဖားသူ၏ခေါင်းပေါ်မှာဆရာဝန်။ ဖားေျပာသည္။'ဆရာဝန်၊ကြည့်ရှု၊ငါသည်အရာတစ်ခုခုသို့တိုးမြှင့်အတွက်။ 'ယောက်ျားနှင့်အတူဖားအပေါ်လူအဖို့။။။။။ ဖားေျပာသည္။'ဆရာဝန်၊ကြည့်ရှု၊ငါသည်အရာတစ်ခုခုသို့တိုးမြှင့်အတွက်။ 'သင်သွားဖို့ဆရာဝန်။ ဆရာဝန်မှသူ့ကိုအတွက်နေစဉ်၊ထို့နောက်သူသည်သူ၏ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း'အရှင်းလင်းမှု။ သင်သည်အရှုးဖြစ်၏။ 'လူကိုေျပာသည္။'ကျွန်မဒုတိယထင်မြင်ချက်။ 'ဆရာဝန်က:'ဘယ်လိုသင်ချင်။ သင်အရုပ်ဆိုး။ '*အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲအ ၊တစ်စျေး၊တစ်စိတ်ရောဂါနှင့်အ ၊ ခဲ့တဲ့သဲလွန်စ၊ဒါပေမယ့်ဘာမှမခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကိုမျှစိတ်ကူးရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်အားလုံးကိုအဆိုပါစိတ်ရောဂါရှိတယ်မသိနိုင်ဘူး၊ဒါပေမဲ့အားလုံးနားလည်မှုအ ရာ၊အရာအားလုံးကိုသိတယ်၊ဒါပေမယ့်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပါသည်။ လူထိုင်နှင့်အတူရောဂါ။ ဆရာဝန်မေး:'ကားအဘယ်ပြဿနာသင်ရှိသည်။ 'လူနာ:'ဆရာဝန်၊ငါတွေ့မြင်နိုင်သည်။ 'ဆရာကို'အိုး။ အခါစတင်။ 'လူနာ:'နောက်ကြာသပတေးနေ့ပါ။ '*ထိုင်လေးမှာဆရာဝန် ။ မျက်စိဆရာဝန်ကပြောပါတယ်:'ငါသွားတာပါ။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်'။ အေျပာတာပါအပျံသန်း။ အ:လည်ပင်းနှင့်ခြေထောက်များသို့ပြောပါတယ်။ အ ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်:'ငါနှင့်အတူလာ။ ကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့အသီးအသီးအခြား'။ အဆိုပါပါရဂူဟုဆို:'ကျွန်တော်ထင်မယ်မင်းချွတ်။ အမျိုးသမီးဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ ငါပြန်ကြည့်တွင်း'။ 'ကောင်းသောနေ့၊ဆရာဝန်၊ကျွန်မရဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပေါ့။"လာမယ့်တ၊ကျေးဇူးပြု။ '*အကဲဆရာဝန်၏အစိတ်ရောဂါဆေးရုံ၊စုဝေးသူနာပြု:'သင်အမှန်တကယ်ရှစ်လူနာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိ၊ကိုထည့်လေ့မရှိမီးထွက်။ 'အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူနာပြုများမှာအံ့။ 'ရှစ်။ အဘယ်ကြောင့်ရှစ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆယ်သုံးပြန်သည်။"အခုတော့ကျွန်မပြောပြမယ်များအတွက်နောက်ဆုံးသောအချိန်'၊ မှာဆရာဝန်၊သူနာပြု။ 'လျှင်သင်ဖြည့်စွက်ထွက်အသေခံလက်မှတ်၊ထို့နောက်သင်ရေးအောက်မှာသေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်း၊ထိုရောဂါ၏နာမတော်နှင့်နာမတော်ကိုအမှီတက်ရောက်သမား၏။
အွန်လိုင်းရှေ့နေများကိုရရှိနိုင်နာရီဝန်းကျင် အသီးအသီး၏ဒေသများတွင်လူ့လှုပ်ရှားမှုနိုင်ခြင်းအားဖြင့်မှန်ဘီလူး၏ဆက်ဆံရေး။ သူတို့အဟောင်းတွေကြီးထွားအဖြစ်မှတဖြည်းဖြည်းချဲ့ထွင်ဥပဒေကြောင်းအရအနိမိတ်၏သိစိတ်၊အလျင်အမြန်ဖြေရှင်းရန်ဥပဒေရေးရာပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောအမြားအသက်တာ၏။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်အသိပညာ၊စွမ်းရည်ခုခံကာကွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်စာတတ်ေြမာက်နိုင်အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၏အသက်တာ။ သွားကြဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတွေ့ရှအပေါင်းတို့၏ပရိယာယ် တက္ကသိုလ်တွင်သို့မဟုတ်ဥပဒေသင်တန်းများ။ တစ်ဦးအရည်အချင်းအထူးကုသင်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်အားလုံးအပေါ်မေးခွန်းများနှင့်အကူအညီမည်သည့်ပြဿနာမျှဖြေရှင်းပေးတွက်အချိန်အတိုတောင်းတဲ့ကာလ။ လက်ရှိခေါင်းစဉ်-အဘယ်အရာကိုမေးခွန်းမေးအဆိုပါရှေ့နေအဘယျသို့မဟုတ်ပါဘူးခပ်သိမ်းသောဧည့်သည်သင့်ဆိုဒ်သို့ဖြေဆိုရန်ရှာကြံသည်ဆွဲရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊မတိုင်းတရားဝင်တယ်ကြွားသင့်လျော်သောအမျိုးမျိုးအကြောင်းအရာ၊များသောအားဖြင့်အလုပ်ရှုပ်ကျဉ်းမြောင်းသော၊နှင့်ဤကိုလည်းသက်ဆိုင်သူမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုအွန်လိုင်း။ အဓိကသော့ချက်အကျိုးခံစားခွင့်၏အကြံပေးဆိုဒ်များလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်။ အဲလုံးဝမရှိကန့်သတ်အပေါ်အဆိုပါဘာသာရပ်၏သင်မေးနိုင်မေးခွန်းများကိုရှေ့နေ:ေျမကြက္၊ခရက်ဒစ်၊ယာဉ်မတော်တဆမှု၊ချေးငွေများ၊စသည်တို့ကို။ အဘယ်ကြောင့်လှည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီနေ့တိုင်းရာပေါင်းများစွာတို့အလွန်စိတ်အားထက်သန်ဖို့အဖြေကိုသိရဖို့သင်၏မေးခွန်း။ လူတစ်ဦးချင်းစီလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်၊ဒါကြောင့်အရေးမပါဘူးဘယ်အခန်းကဏ္ဍအတွက်အခြေအနေ၊သူကစား:အကြမ်းဖက်၊အဆိုပါအာမခံ၊မ်က္ျမင္သက္ေသ၊တရားလို၊တရားခံ၊စသည်တို့ကို။.
ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ နှစ် လွှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု တွေ့ဆုံရန် ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြော်ငြာ ချက်တင်ဗီဒီယိုများအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆှဗီဒီယိုချက်တင် ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ အခမဲ့